Kuwait oo qeyla dhaan kasoo saartay khilaafka sii xoogeysanaya ee dowladaha khaliijka - Caasimada Online
Home Warar Kuwait oo qeyla dhaan kasoo saartay khilaafka sii xoogeysanaya ee dowladaha khaliijka
Kuwait oo qeyla dhaan kasoo saartay khilaafka sii xoogeysanaya ee dowladaha khaliijka
Muqdisho (Caasimada Online) – War qoraala oo kasoo baxay Wasaarada Arrimaha dibada dalka Kuwait ayaa waxaa lagu sheegay inuu sii xoogeysanaayo khilaafka ka dhex aloosan dowladaha Khaliijka.
Qoraalka oo kasoo baxay Xafiiska Wasiir ku-xigeenka Arrimaha dibada Khaled al-Jarallah, ayaa waxaa si gaara dowladaha banaanka ka ah khilaafka looga dalbaday inay u istaagan xalinta khilaafka taagan.
Khaled al-Jarallah, waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xal kama danbeyn ah loo raadiyo khilaafyada ka dhex aloosan dowladaha Khaliijka.
‘’Waxaan qireynaa in Khilaafka uu weli yahay mid taagan, waxaa jira xiisado hoose oo u baahan in laga gaaro xal kama danbeyn ah, sidaa aawgeed waxaan dowladaha carbeed ee aan qeybta ka aheyn khilaafka ka dooneynaa inay muujiyaan kalaintooda’’
Wasiir Khaled al-Jarallah, ayaa sheegay in hadii khilaafkan sii jiitamo uu khasaaro ku keeni doono guud ahaan xasiloonida iyo horumarka gobalka.
Wuxuu sidoo kale Khaled al-Jarallah sheegay in xiisada ka dhex aloosan dalalkaasi ay dib u dhac ku keentay mashaariic badan oo ay horey u wada qaban jireen dowladahaasi.
Wuxuu sheegay in docda kale ay dib u dhacyo ku yimaadeen wadahadaladii Khaliijka kula jiray dalalka caalamka sida wadanka Maraykanka.
Sidoo kale, Kuwait ayaa sheegtay inaanu wali ka quusan xal u raadinta khilaafka, hase ahaatee la doonaayo inay meel u dhacdo xiisada isla markaana ay ku lug yeeshaan dowladaha kale ee carbeed.
Haddalka kasoo yeeray Dowlada Kuwait ee ku aadan Xiisada ayaa kusoo beegmaaya xili maalmo un ka hor Wasiirka Arrimaha Dibada Qatar uu sheegay in lama huraan tahay in la xaliyo khilaafka kala fogeeyey dalalka Khaliijka.